Zvemari | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Nehurombo, vanhu vazhinji vanonyorera mari yechikwereti havafungi nezvenyaya yekuti vanogona kurwara, kurasikirwa nemabasa kana kupinda mune mamwe mamiriro ezvinhu akaoma. Sezvo mutemo, matambudziko ne solvency haamuki nekuda kwe ...
Kugara pasina chengetedzo yemari yezuva rinonaya chisarudzo chakapusa. Kunyangwe hazvo paine zvinhu zvakaoma munyika, unogona kudzokorora bhajeti remhuri yako nenzira yekutanga kuchengetedza mari, nokudaro vachigadzira ...
Zvinotakurwa pamoto peturu uye diziri imhando yemutero unobhadharwa kune vemabhizimusi nemasangano. Kubvisa kwavo kunoitwa mukuitwa kwemamwe mabasa ebhizinesi, kusanganisira kufamba kwezvigadzirwa kumuganhu wetsika ...
Sberbank, "Yehupfumi" pakeji yebhangi mbozha: wongororo
Kwemakore akati wandei, iyo Internet haina kungova nzvimbo yevaraidzo, asi zvakare nzvimbo yekutengeserana, mashandiro pamakaunti, kubhadhara kwebasa raitwa, kutengesa uye masevhisi. Ehe, kutamisa mari ...
Parizvino, telecommunication mobile operators inokupa iwe kwete chete yepamusoro yekukurukurirana mhando, yakaderera mafoni manhamba, asiwo kugona kwekutaura kunyangwe kana wapedza mari muaccount ...
Inishuwarenzi isingagumi: iri sarudzo yakakwana yevatengesi vemotokari
Chiratidzo chemari. Iko kunyoreswa kwemashoko makuru emari enyika
Ndekupi kukwereta mari nokukurumidza, kunyange kana pane zvikwereti zvakakosha?
Chigaro cheNorway chinonyanya kukosha muNorway
Ndeipi chirango, kana chisina kubatanidzwa neinishuwarenzi, unogona kubhadhara
"Pension-pamwe" - mupiro kuSberbank. Terms uye Kufarira
Nzira yekuwana sei nzvimbo yekuvakwa kweimba yekugara? Ungasarudza sei nyika yekuvaka imba?
Ihotera. Chinyiko, chii ichocho uye zvinobatsira zveimba iyi
Ndeipi inotyisidzira kukundikana kubhadhara chikwereti? Handigoni kubhadhara chikwereti, ndeipi migumisiro yeizvi?
Mibvunzo ye292 mu database yakagadzirwa mu 1,079 masekondi.